एजेन्सी, २ बैशाख । हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो धोकाधडी एवं ठगी काण्डका सञ्चालकको निधन भएको छ । इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो तथा चर्चित पोन्जी स्किमका सञ्चालक बर्नी म्याडोफको बुधबार निधन भएको हो ।
बुधबार बिहान नर्थ क्यारोलिनास्थित एक जेलमा म्याडोफको निधन भएको हो । ८२ वर्षीय मडोफले हजारौं लगानीकर्तालाई पोन्जी स्किममा फँसाएर झण्डै ६५ बिलियन अमेरिकी डलर ठगी गरेका थिए । ठगी गरेको आरोप पुष्टि भएपछि उनलाई १५० वर्षको काराबास सजाय दिइएको थियो ।
पोन्जी स्किम एक प्रकारको ठगी धन्दा हो जहाँ अस्तित्वमा नै नरहेको व्यवसायको सफलतामाथि मानिसले विश्वास गर्छन् किनभने नयाँ लगानीकर्ताको पैसाबाट प्राप्त नाफा पुराना लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइन्छ ।
कैयौं वर्षसम्म आफ्नै बलमा उदाएका धनाढ्यको रुपमा म्याडोफलाई हेरिन्थ्यो । उनले शेयर बजारमा आउने उताढचढावलाई सँधै चुनौती दिन्थे । नाक्डक शेयर बजारको अध्यक्ष भएपछि लगानीकर्ताहरु म्याडोफको पछाडि लागेका थिए ।
म्याडोफले सञ्चालन गरेको लगानी परामर्श व्यवसाय वाल स्ट्रिटको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो शेयर ठगी काण्ड बनेको थियो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीका बेला उक्त काण्डको पर्दाफास भएको थियो ।
विश्वका झण्डै १३६ मुलुकका ३७ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता म्याडोफले सञ्जालन गरेको पोन्जी स्किमको शिकार बनेका थिए । यसरी शिकार बन्नेमा सर्वसाधारणदेखि केभिन बेकन, काइरा सेजविक जस्ता सेलिब्रिटी समेत थिए ।
म्याडोफले सञ्जालन गरेको पोन्जी स्किमबाट उनको परिवारका सदस्य र उनी निकट मानिस समेत शिकार बनेका थिए । उनीबाट ठगिएका कतिपय लगानीकर्ताले आत्महत्या गरेका थिए भने कतिपयले मानसिक सन्तुलन गुमाएका थिए ।
ठूलो मात्रामा ठगी गरेको पुष्टि भएपछि म्याडोफलाई सन् २००८ को डिसेम्बर ११ मा पक्राउ गरिएको थियो । उनले २००९ मार्चमा आफूले शेयर बजारमा धोकाधडी एवं ठगी गरेको स्वीकारेका थिए । उनले आफू यसबाट लज्जित भएको भन्दै सबैसँग माफी समेत मागेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई अधिकतम काराबास सजाय अर्थात १५० वर्षको काराबास सजाय दिइएको थियो । अदालतले १७१ बिलियन डलरको फर्फिचर अर्डर (धोकाधडीबापत् तिर्नु पर्ने जरिवाना) जारी गरेपछि म्याडोफले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रियल स्टेटसहित सबै सम्पत्ति गुमाएका थिए । यसबाहेक, उनकी श्रीमतिले दाबी गरेको ८९ मिलियन डलर समेत जफत भएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै म्याडोफको व्यवसायमा लगानी भएको झण्डै १७.५ बिलियन डलरमध्यै १३ बिलियनभन्दा बढी क्षतिपूर्ति स्वरुप लगानीकर्तालाई नै फिर्ता दिइएको थियो । उनको व्यवसायमा ३६ बिलियन लगानी भएको थियो तर यसमध्ये १८ बिलियन गायब भएको मानिन्छ ।
म्याडोफले सन् १९६० मा सामान्य खाले शेयरको ब्रोकरिङबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । पछि उक्त व्यवसाय बर्नार्ड एल. म्याडोफ लगानी सुरक्षण कम्पनीमा परिणत भएको थियो । सो कम्पनी कुनै बेला वाल स्ट्रिटमा ठूलो शेयर कारोबारकर्ता बन्न पुगेको थियो ।
ठगी व्यवसायको पर्दाफास हुनुपूर्व म्याडोफलाई चर्चित समाजसेवी र परोपकारी व्यक्तिको रुपमा चिनिन्थ्यो । उनको सम्पत्ति रोक्का भएपछि उनले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसाय मात्रै प्रभावित बनेनन् । विभिन्न च्यारिटी कार्यक्रम र संस्था समेत प्रभावित भएका थिए ।
बैंकर्सलाई कोरोना संक्रमण, जिल्लाभरका बैंक बन्द
आइतबार सुनको मूल्य बढ्यो, तोलामा कति ?
१० लाखको केरा गोदाममै कुहियो
खेतका गह्रामा सपना फुलाउँदै युवाहरू
नेपाल लाइफले ल्यायो ‘नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना’
‘सत्तालिप्सामा अल्झिएर श्रमजीवी मजदुरहरुलाई राहत प्याकेज दिन नभुल’
टेलिकमको एकमहिने ‘लकडाउन स्टे कनेक्टेड’ अफर
सुनको मूल्‍य घट्यो, हेर्नुस् आजको मूल्य